मूल विधि: aioli वा aioli | ThermoRecines
साल्सास5 मिनेट4 व्यक्ति250२ क्यालोरी
के हाम्रो ग्यास्ट्रोनोमीमा चामलको एक राम्रो प्लेट भन्दा राम्रो घर बनाएको आइओली भन्दा केहि बढी परम्परागत छ? अनगिन्ती व्यंजनहरू सँगसँगै खानको लागि यो एक स्वादिष्ट विधि हो, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो मनपर्नेहरू चामलको भाँडा, फिडु वा सिधा रोटीमा हुन्छन्। एक खुशी!
हामीलाई थाहा छ कि यो नुस्खाले तपाईंलाई समस्याहरू दिँदै छ किनकि तपाईंले हामीलाई लेख्नु भएको छ यो काटिएको छ र यो राम्रोसँग बाँधदैन। किनभने आज हामी तपाईंको चरण-चरणमा भिडियो ल्याउँदैछौं ताकि तपाईं यसलाई कसरी गर्ने भनेर देख्न सक्नुहुनेछ र त्यो वास्तवमा, यदि तपाईंले चरणमा पालना गर्नुभयो भने यो भिडियोमा देखापर्छ, यो पहिलो पटक उत्तम हुनेछ।
र यदि यो काटिएको छ भने यसलाई कहिल्यै नफाल्नुहोस् !! यसलाई सच्याउने वा अवयव पुनः प्रयोग गर्ने तरिकाहरू छन्। थोरै तल तपाईंसँग सबै विवरणहरू छन् 😉
हामी तपाईंलाई एना वाल्ड्स (थर्मोरसेटसको पूर्व सम्पादक) द्वारा तयार गरिएको अर्को संस्करण तल पनि छोडछौं जसमा उनले अण्डको पहेंलो फ्याँकिदिन्छ।
1 मूल विधि: aioli
2 उत्तम aioli को लागी सल्लाह
3 यदि मैले आइयोली काट्यो भने म के गर्ने? यसलाई नहेर्नुहोस्!
4 अण्डाको पहेंलोको साथ घरेलु आइयोली
लोकप्रिय आइओली, आइओली वा लसुन तेल थर्मामिक्समा अनुकूलित
२० ग्राम खुली लसुन (करीव gar लसुन लगभग)
१० ग्राम निम्बूको रस
सूर्यफूल तेल को 125 g
हामी घाम र आरक्षित मा सूर्यफूल तेल तौल।
खुलेको लसुनको लौंगहरू, कागतीको रस, कुमारी अलिभको तेल र नुनलाई शीशामा राख्नुहोस्। हामीले पिट्यौं Speed ​​मिनेट वेगमा।
हामी शेषका पर्खालहरूमा रहिरहन्छौं र फेरि पिट्छौं १ मिनेट, गति 1।
हामी अवशेषहरू फेरि तल राख्छौं, चलाउनुहोस् र दोहोर्याउनुहोस् १ मिनेट, गति 1।
हामीले पुतली राख्यौं र हामी प्रोग्राम गर्दछौं3मिनेट, गति 4। हामी थोरै नरम तेल, थ्रेड द्वारा थोरै ढक्कनमा खन्याइरहेका छौं, जसले गर्दा यो स्लाइड हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै नोजलबाट falls मिनेटमा खस्छ।
हामी पुतली हटाउँछौं। स्प्याटुलाको साथ, हामी गिलासको तल्लो तिर आइओली कम गर्छौं र अन्तमा मिक्स गर्दछौं Seconds० सेकेन्ड, गति 10।
हामी एक चटनी डु boat्गामा राख्छौं र तुरुन्तै सेवा गर्दछौं वा एयरटिग्ट भाँडोमा हाल्दछौं र फ्रिजमा राख्छौं।
यो एक अण्ड छैन को रूप मा, यो गर्मी को समयमा तयार गर्न को लागी एक आदर्श नुस्खा हो। हामी कुनै समस्या बिना keep दिन फ्रिजमा राख्न सक्छौं।
उत्तम aioli को लागी सल्लाह
त्यहाँ २ आधारभूत चीजहरू छन् जुन तपाईंले त्यसो गर्नुपर्दछ ताकि आईओली उत्तम बाहिर आउँदछ।
जैतुनको तेलले लसुन क्रस गर्नुहोस् जति पटक आवश्यक हुन्छ तपाईंसँग टाँस नभएसम्म। हामीले यसलाई3पटकसम्म काट्यौं, भित्ताबाट ब्लेडमा बाँड्दा र फेरि सुरु गरेर।
थ्रेडमा तेल थप्नुहोस्, minutes मिनेट खर्च गर्नुहोस् कि इमल्सन जगसँगै रहन्छ, तेल बिस्तारै बिस्तारै र बन्द नगरीकन। त्यो कुञ्जी हो कि यो लि linked्क बाहिर आउँछ र काट्छ। यदि हामीले यसलाई अचानक बाहिर फ्याँक्यौं भने, यो निश्चित रूपमा गल्ती हुनेछ। तपाईंले थोरै धैर्यता राख्नुपर्नेछ (तपाईंको हात थाम्नेछ, निश्चित रूपमा)
यदि मैले आइयोली काट्यो भने म के गर्ने? यसलाई नहेर्नुहोस्!
यदि तपाईं चरणहरू अनुसरण गर्नुहुन्छ जस्तो यो भिडियोमा देखापर्दछ, यो कटौती गर्ने सम्भावना छैन। तर कहिलेकाँही यो हुन सक्छ, विशेष गरी यदि हामीसँग, उदाहरणका लागि, एकदम चिसो तेल (र यो राम्रोसँग बाध्य छैन)। आदर्श रूपमा, सबै चीज कोठाको तापक्रममा हुनुपर्दछ।
यदि तपाईं काटिएको छ भने यसलाई कहिले पनि नहेर्नुहोस् !! निम्न गर्नुहोस्:
काटिएको मिश्रण एक स्ट्रेनर मार्फत धैर्यतासहित कन्टेनरमा दिनुहोस्। लसुन कन्टेनरमा तन र तेलमा रहनेछ।
हामी कन्टेनरमा भएको २ have ग्राम तेलको साथ फेरि लसुन गिलासमा राख्छौं।
हामी पाइला पछिको चरण अनुसरण गर्दछौं।
यदि यो फेरि काटियो भने कि त यो टाढा नफर्काउनुहोस् !! यदि यो दोस्रो पटक भयो भने, हामी के गर्छौं सामग्रीहरू अलग अलग प्रयोग गर्नु हो। हामी यसलाई शान्तपूर्वक तनाव दिन्छौं भने लसुनको तेलबाट अलग गरिन्छ।
हामी लसुन पेस्ट कुनै पनि अन्य नुस्खाको लागि प्रयोग गर्दछौं: लसुन संग केही gulas, अदुवा पेस्ट, ग्यालिसियन चार्ट... वा चामल वा फलफूलको कुनै हलचल-फ्राई को लागी।
हामी तेल अरू कुनै पनि पकाउनको लागि प्रयोग गर्दछौं, उदाहरणका लागि केही आलु फ्राई गर्ने, कुखुरा वा माछा पकाउने भट्टीमा वा भेरोमामा, केहि तरकारीहरू ... व्यावहारिक रूपमा केहि पनि।
अण्डाको पहेंलोको साथ घरेलु आइयोली
लेखक: अना वाल्ड्स
यो भनिन्छ आइओली o लसुन तेल (मूल को स्पेनिश अनुवाद allioli) र हाम्रो एक हो सॉस अधिक लोकप्रिय। मूल मोर्टारमा बाँधिएको छ, मालेटको साथ, वा प्लेटमा पनि, काँटाको साथ। मेरो बुबाले मलाई सिकाउनुभयो जब म यो लसुन, तेल र नुन (सबै भन्दा प्युरिस्टहरू जस्तै) मात्र गर्न सक्थें, र त्यहाँ तपाईंले मलाई मोर्टारमा गदा परिवर्तन गर्नु भयो, सबै गर्व गर्‍यो कि यो निकै कडा भयो।
सत्य यो हो कि मलाई भ्वाँसियामा गरेजस्तै अण्डाको पहेंलो भागले राम्रो प्रदान गर्दछ। र यो संस्करण हो जुन म तपाईंलाई Thermomix को लागी ल्याउँछ, अण्डाको पहेंलो, लसुन, तेल र नुनको साथ (कहिल्यै सम्पूर्ण अण्डाहरू, कृपया, त्यो अर्को फरक चटनी हो)। र सॉसको बारेमा कुरा गर्दै, के तपाईंले यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नु भएको छ एभोकैडोको साथ
२ लसुनको लव्स (ब्रोभट तपाई reach सम्म पुग्न सक्नुहुनेछ, र जो मसालेदार धेरै मनपर्दैन, तपाईं केवल १ राख्न सक्नुहुन्छ)
Gin० मिलि (आधा कप) कुमारी अलिभ तेल
१ अण्डाको जर्दी (यो ठण्डा छैन कि महत्त्वपूर्ण छ, यो कोठाको तापक्रममा छ)
१०० मिलि हल्का जैतुनको तेल वा सूर्यफूल तेल
हामीले खुल्ला लसुनको लौंगहरू, अण्डाको पहेंलो कुमारी, कुमारी जैतूनको तेल र नुनलाई शीशामा राख्यौं। हामीले पिट्यौं Speed ​​मिनेट वेगमा।
हामी शेषका पर्खालहरूमा रहिरहन्छौं र फेरि पिट्छौं Seconds सेकेन्ड गतिमा।
हामीले पुतली राख्यौं, गिलासलाई टम्बलरलाई माथि र कार्यक्रम सहित कभर गर्नुहोस् गति 4, कुनै समय छैन। हामी थोरै चिल्लो तेलको ढक्कनमा खन्याउँदैछौं, ताकि यो स्लाइड हुन्छ र बिस्तारै मुखबाट झर्छ। यसले केहि लिन सक्दछ2मिनेटस।
र यो तयार छ।
थप जानकारी - एवोकैडो आइओली
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, क्षेत्रीय भोजन, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ 15 मिनेट भन्दा कम, साल्सास, भेगन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » साल्सास » मूल विधि: aioli
घातक आइओली नुस्खा !! म यसमा कहिल्यै पुग्न सकेन र मैले क्रमशः चरण-चरण अनुसरण गरें ... मैले पुस्तकमा एउटा बनाएँ र यो बाहिर आयो। मैले कागती थप्न पर्छ, यसलाई अधिक समय दिनुहोस् ... मैले देखेको छैन !! सावधान हुनुहोस्, कसैले यो गर्छ
क्रसलाई जवाफ दिनुहोस्
मूल आईओली रेसिपीमा लिम्बू छैन ... अब, यदि तपाईं यसलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं त्यसो गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
आइयोलीका दुई महत्त्वपूर्ण भागहरू छन्, तपाईं हातले वा थर्मोमिक्सले बनाउनुभएकोमा फरक पर्दैन। पहिलो यो हो कि लसुन, जर्दी र तेलको मिश्रण राम्रोसँग मिश्रित हुनुपर्दछ। दोस्रो यो कि बाँकी तेल हतार नगरी थोरै थोरै मिलाउनु पर्छ। थर्मोमिक्सको साथ यो धेरै सजिलो छ किनकि यो फितरमा राखिएको छ र यो खस्छ र अलि-अलि पछि सार्छ।
यसका साथै, मेरो अनुभवले मलाई भन्छ कि पदार्थको तापक्रम पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले म फ्रिजबाट ताजा अण्डा प्रयोग गर्दिन। वास्तवमा, धेरै पटक म तिनीहरूलाई फ्रिजमा राख्दिन।
म तपाईंलाई सल्लाह दिन को लागी सल्लाह दिन्छु… जो कोही खराब दिन हुन सक्छ!
अघिल्लो टिप्पणीहरू जस्तै जुन मैले पढिन। सिंकमा। सबै पानी।
नकारात्मक पक्ष भनेको त्यहाँ फ्रिज बाहिर अण्डाहरू थिएनन्। मैले एउटा मात्र लिएँ र हामी अली ओली र ताजा रोटीबाट भाग्यौं।
नमस्कार यो, हामी दु: खी छौं कि यो तपाईंलाई फिट थिएन। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि सबै सामग्रीहरू कोठाको तापक्रममा छन्, सायद तपाईंको अण्डा एकदम चिसो थियो। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले धागामा तेल थप्नुभयो, जुन झन्डै ड्रप द्वारा ड्रप हुन्छ। तपाईं यो नुस्खा बनाउन धैर्य हुनुपर्छ। निराश नहुनुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस्। चाँडै नै हामी यो रेसिपीको साथ एउटा भिडियो बनाउँदछौं ताकि तपाईं यसलाई कसरी गर्न सक्नुहुनेछ। 🙂
घातक, यो लाजमर्दो कुरा हो कि मैले समीक्षा पढाई पढ्नु अघि सोचेको छैन?
मलाई पनि त्यस्तै भयो, मैले चरणबद्ध विधि अनुसरण गरेँ, मसँग फ्रिजबाट अण्डो थियो तर मैले यसलाई लिंक गरेन, मैले यसलाई फ्याँक्नु पर्छ र एउटा पुस्तकमा बनाउनु पर्छ।
मलाई माफ गर्नुहोस्, नुस्खा बाहिर आएन। म स्वीकार गर्दछु कि यो सजिलो विधि होईन, यद्यपि यो जस्तो लाग्न सक्छ, तर यदि पुस्तकमा तपाईंको लागि काम गर्दछ भने ... यसलाई स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
नमस्ते !!! ठिकै छ, यो मेरो लागि धेरै राम्रो भयो, पुस्तकमा यो पनि हो, तर मेरो विचारमा यो सधैं जत्तिकै समान छ!
असुनलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं असुन ठीक हुनुहुन्छ। यो अधिक परम्परागत हो तर सबैले आफूले चाहेको कुरा प्रयोग गर्दछ !!
घातक यो नुस्खा ...। कहिल्यै माथि गएन…। र मेरो सामग्री फ्रिजमा थिएन…। कस्तो लाज अब मलाई अर्को गर्न पर्छ ...। 🙁
माफ गर्नुहोस्, तपाईंले यो नुस्खा पाउनुभएन। सत्य यो हो कि यो सजिलो विधि छैन। हातले गरेको खण्डमा उही कुरा साँचो हो। म मान्छेहरु लाई अियोली बनाउन को लागी वर्षौं देखि हेरिरहेको छु र म तिमीलाई भन्न सक्छु कि कहिलेकाँही कुनै विवरण बिना यो बाहिर कटौती।
यदि तपाईंसँग आईयोलीको लागि एक नुस्खा छ जुन अचम्म लाग्दो छ भने, म यसको मूल्यांकन गर्दछु यदि तपाईं यो हामीलाई साझा गर्नुहोस्।
यसले कि त मेरो लागि बाहिर काम गरेन र सामग्रीहरू कोठाको तापक्रममा थिए, साथ साथै म धेरै बिस्तारै गएँ, तर पुतली बिना यो पूर्ण रूपमा बाहिर आउँदछ।
मैले टिप्पणीहरू अघि पढ्नुपर्‍यो ... घातक! यो मलाई १० मिनेट लाग्यो किनकि म एकदम सावधान थियो र यो गर्न चाहन्छु सुस्त ढिलो र केहि पनि छैन ... सबै पानी।
धेरै बर्षदेखि मैले आयियोली प्रतियोगिता प्रस्तुत गरिरहेको छु जहाँ गृहिणी र अनुभवी व्यक्तिहरू सहभागी हुन्छन्। तथ्य यो हो कि ... कहिलेकाँही तीनिहरू पनि काट्छन्। यो मेयोनेज जस्तो छ, यो पकाउनेको प्रश्न होईन किनकि यो परिमार्जित र सही छ। यो मात्र हुन्छ!
अर्को समयको लागि खुशी हुनुहोस् !!
घातक ... उही कुरा मलाई भयो, मैले टिप्पणीहरू पढ्नुपर्‍यो ... अब यसलाई फ्याँक्न र समय बर्बाद गर्नु ...
तपाईं सहि हुनुहुन्छ कि यो नुस्खा राम्रोसँग बाहिर आउँदैन, तर सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा भनेको यो कि Mayra Fernández Joglar ले देख्दैन कि नुस्खामा ठूलो त्रुटि छ किनभने कुल तेल २ 250० gr हुनुपर्दछ। र १ grams० ग्राम छैन कि यसले भन्दछ, त्यसैले योसँग १०० ग्रामको अभाव छ जुन यसलाई अझ पूर्ण शरीर र तरल नभएको बनाउँछ।
यो एक विपत्ति भएको छ! यो असफल प्रयासमा छोडियो
मैले सबै चरणहरू अनुसरण गरेको छु, यो पनि निश्चित गर्न कि अण्डा कोठाको तापक्रममा थियो जुन मैले यसलाई भर्खरै राखिएको कुखुराबाट संकलन गरेको हो; मैले टिप्पणीहरू पढें र नुस्खाको रूपमा यो यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, यो बाहिर निस्केन, मैले तिनीहरूमा अवलोकन गरिएको संशोधनहरू लागू गर्न थालें ... अन्ततः राम्रो पछि जब मैले स्थिरता प्राप्त गरेन भने मैले यसलाई फ्याँक्ने निर्णय गरे र थर्मोमिक्स पुस्तकबाट नुस्खा बनाउनुहोस् जुन कुनै समस्या बिना नै बाहिर आयो।
सबै तरल पदार्थ, यसलाई फ्याँक्नको लागि। यो नगर्नुहोस्। तपाईं नुस्खा फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ।
लालालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते लाला, हामी आइयोली सँगै एक पछि अर्को भिडियो पोस्ट गर्ने छौं। यो एक जटिल नुस्खा हो किनकि जब तपाईंले तेल थप्नुहुन्छ तपाईं एकदम होशियार हुनुपर्छ। तपाईंले वास्तवमै यसलाई लाइनमा राख्नु पर्छ, यदि हामी ओभरबोर्डमा जान्छौं भने, यसले काट्छ। जे भए पनि, यदि यो काटिएको छ भने यसलाई तान्नुहोस्, तेलबाट लसुन अलग गर्नुहोस् र लसुनलाई पछाडि गिलासमा राख्नुहोस् र फेरि तेल हाल्नुहोस्। यसरी ऊ निको हुन्छ।
मटर, बेकन र हेमको साथ एशियाली चामल